Xaqiijiyay: iPhone XS, XS Max iyo XR, iyo illaa 512GB awoodda | Wararka IPhone
Markaan ku sii soconno sicirkan, ma jiri doonaan wax haray oo aan shaaca ka qaadno dhacdada soo bandhigi doonta iPhones-ka cusub 19:00 fiidnimo. Xogo cusub oo laga soo qaaday websaydhka Apple ayaa xaqiijinaya waxa maalmihii la isla dhex marayay: magacyada iPhone-ka cusub ayaa noqon doona XS, XS Max iyo XR.
Marka lagu daro magacyada boosteejooyinka cusub, waxay sidoo kale umuuqataa inaan ognahay waxa awoodaha moodooyinka cusub ay noqon doonaan, kuwaas Waxay u dhexeeyaan 64GB nooca ugu aasaasiga ah illaa 512GB ee qaabka awoodda sare, wax ilaa hadda aan iPhone lahayn.
Sawirkani waa cabsi ka socota websaydhka Apple. Boggu wali si rasmi ah looma heli karo laakiin waxay ku guuleysteen inay galaan oo ay arkaan lambarka loogu talagalay, marka laga reebo lama filaan raasamaal ah shaki kuma jiro waxa loo yeeri doono taleefannada Apple. Waxa aan weli u baahanahay inaan ogaano waxay noqon doontaa "XS" ama "Xs". Waxaan sharad ku dhigaa xarafka weyn, waa fududaan, laakiin tan waa inaan sugnaa ilaa galabta markay na tusayaan sida saxda ah ee wax loo qoro. Waxa aan ognahay ayaa ah in lagu dhawaaqi doono «Ten S», waxba «XS» in kastoo ay ku adkaan doonto wadamada ku hadla Isbaanishka in loogu yeero «Toban Ese».
Waxaan sii wadi doonnaa inaan fiiro gaar ah u yeelano daadashada daadadka iyo wixii warar ah ee soo kordha si dhakhso leh ayaan kuu sheegi doonaa. Haddii aad rabto inaad tagto dhacdada "bikradaha", waxaa fiican inaad ku rido iPhone-ka qaabka diyaaradda ilaa 19:00.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Xaqiijiyay: iPhone XS, XS Max iyo XR, iyo ilaa awoodda 512GB
Midabada cusub ee iPhone Xr waxaa lagu sifeeyay bogga rasmiga ah ee Apple: jaalle, shacaab iyo waxyaabo kale oo badan